နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက် / အဆိုပါအိုဝါသတင်းထောက်ပထမရုစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်အနုညာတစီရင်ဆွေးနွေး
16/11/2013 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာ 175 သန်းခုံသမာဓိဝီလျံ Kirtley နှင့်ဦးဆောင်ပဲရစ်အခြေစိုက်ခုံသမာဓိဖက်ရှင်ဆိုင်များတ Christophe Duguéအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်, ယူဆောင် & Kirtley, အန္န Crevon နှင့်အတူတွဲဖက်အလုပ်လုပ်, ပညတ္တိကျမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒဲမှာအကြံပေးသူသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိအတွေ့အကြုံဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှင့်အတူဟာရုရှားစကားပြောတဲ့ရှေ့နေ. အဆိုပါသုံးယခင်က Shearman မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ & အတူတူ Sterling, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အဘယ်မှာရှိ, အမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင်, Shearman အဖွဲ့ဝင်များ & Sterling ရဲ့အဖွဲ့, Emmanuel Gaillard နှင့် yas Banifatemi ကဦးဆောင်, အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်အလုပ်မလုပ် 100 ရုရှားကဆန့်ကျင် Yuko ရှယ်ယာရှင်များတစ်သုံးကိုယ်စားဘီလီယံခန့် Insight web studio ၏-based ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိ, သမိုင်းထဲမှာအကြီးဆုံးအစီရင်ခံဖော်ပြထားခုံသမာဓိဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော.
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အင်ဒရူး Newcombe ရဲ့မြင့်မားတဲ့-လေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်အနုညာတစီရင်က်ဘ်ဆိုက်ကဤအသိပေးစာတစ်ခုအနည်းငယ်-redacted ဗားရှင်းထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်, အရာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရရှိနိုင်ပါသည်.
မစ္စတာ. Peterson ရဲ့ဆောင်းပါးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာမြေမှမဖြစ်၏လျက်ရှိသည်သောစာချုပ်ကာကွယ်မှုကိုဖော်ပြထားတယ် 115 စင်ကြယ်သောစာချုပ်တောင်းဆိုမှုများအတွက်သန်း, နှင့်ဘက်မလိုက်ဘဲမျှတသောပြဋ္ဌာန်းချက်များချိုးဖောက်မှုများ၏တောင်းဆိုမှုများပါဝင်သည်, အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးပြဋ္ဌာန်းချက်, မတရားခြင်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုများ, နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်များ၏ expropriation ဝါကျ.
မစ္စတာ. Peterson ပြီးတော့လုပ်ခံရကြောင်းကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးများအတွက်အထူးသဖြင့်အကြီးစားပြောဆိုချက်ကိုမှတ်ချက်ပြု, အမည်ရအမေရိကန်ဒေါ်လာများအတွက် 60 နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးအတွက်သုံးဖြုန်းဖို့အတင်းအဓမ္မသောခြောက်နှစ်သန်း “အလုပ်ကြမ်း” ဘယ်လာရုစ်ထောင်ထဲမှာစခန်း, i.e. အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10 အကျဉ်းထောင်အတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်အသက်တာ၏နှစ်စဉ်အဘို့သန်း.
မစ္စတာနေစဉ်. Peterson ကငျြ့ဝတျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု “ခဲချီးမြှင့်” ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိအတွက်, သူကသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရဲ့မှတ်ချက်ကိုးကား “အလွန်ခက်ခဲဒီတစ်ခုထက်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းကိစ္စတွင်စိတ်ကူးရန်။” အဆိုပါအကြောင်းကြားစာအတွက်, နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကုသမှုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးယီမင် v တော့ဆှေးနှေးခဲ့ ICSID ကိစ္စတွင်ကန္တာရလိုင်းအတွက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသောအဆိုထားသည် “နှိုင်းယှဉ်လျှင် pales” မစ္စတာ၏စွပ်စွဲချက်ကုသမှု. ဘယ်လာရုစ်၏လက်မှာ Mykhailenko, အလွန်ပြင်းထန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်.
မစ္စတာ. Peterson ထို့နောက်မကြာသေးမီ al-Kharafi v လစ်ဗျားဆုကိုးကား, ဘယ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 30 ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီး၏သန်းမကြာသေးမီကကူဝိတ်ကော်ပိုရိတ်အရေးဆိုသူမှဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းထိခိုက်မှုများအတွက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြ, နေ့စွဲကအကြီးဆုံးအောင်, ဘယ်လာရုစ်၏လူ့အခွင့်အရေးကိုပေါ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောစံချိန်တင်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီး၏ပြဌာန်းခွင့်တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသင့်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရဲ့အငြင်းအခုံ ကိုးကား. မတိုင်မီ. သူလည်းတစ်ဦးကိုးကား 2009 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အမှု, အမေရိကန်အစိုးရအမေရိကန်ဒေါ်လာ၏လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်ဘယ်မှာ 100 အမှားများထောင်ချဘို့သန်း.
မိမိအဆောင်းပါးပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများအတွက်တူညီခြင်းနှင့်သဘောထားကွဲလွဲသုံးသပ်ပြီး, သူကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုယ်စားပေါ်အခိုင်အမာသတိပြု “ကံကောင်းတာ” ထို့အပြင်နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ဖြင့်ကာကွယ်ထား, "ဘယ်လာရုစ်လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်ဥရောပကွန်ဗင်းရှင်းဖို့ပါတီမဟုတ်သောအရာဥရောပ၏တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်၏။ " ကတည်းက
သူကလည်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ဆုံးမစကားကိုသူတို့ဘယ်လာရုစ်ဆန့်ကျင်ယူဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြသောအစီအမံများပြုလုပ်ကာနောက်ဆုံးဆုနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့ဆန္ဒရှိမဖြစ်သင့်မှတ်ချက်ပြု, ဘယ်လာရုစ်၏သိမ်းယူခြင်းများပါဝင်သည်အရာ’ လေယာဉ်ပျံ. နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ, မိမိအစိတျအပိုငျးအတှကျ, သူဘယ်လာရုစ်အတွက် operating လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များကမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်ပမာဏ၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုပေးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်.
“ကျနော်တို့အလွန်လူဆိုးစာရင်းပြည်နယ်ရုစ်ဆန့်ကျင်ကဒီခုံသမာဓိစတင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်, အရာအလေးအနက်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များထိခိုက်’ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်အခွင့်အရေးများ,” လို့သူကပြောပါတယ်သယ်ဆောင် & Kirtley မိတ်ဖက်မစ္စတာ. Kirtley. “ဘယ်လာရုစ်ဥရောပအတွက်အနည်းဆုံးလွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေးစနစ်အားရှိပါတယ်, ပညတ်တရား၏အဘယ်သူမျှမအုပ်ချုပ်မှုကိုရှိပါတယ်, ၎င်း၏ကြီးမားသောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအဘို့အလူသိများသည်, ထိုသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များသိမျး’ မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမလျော်ကြေးငွေနှင့်အတူရုစ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ. နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရဲ့ဘဝကိုလည်းကြောင့်အလုပ်ကြမ်းစခန်းထဲမှာခြောက်နှစ်သည်သူ၏အမှားများထောင်ချဖို့ရုစ်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမဆင်ခြင်တုံတရားအခြေခံပေါ်မှာဖကျြဆီးခံခဲ့ရ. ငါတို့သည်ဤကိစ္စတွင်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်.”
မစ္စတာ. Peterson ရဲ့ဆောင်းပါးမှာဝင်ရောက်စေခြင်းငှါ: https://iareporter.com/articles/20131113 (subscription ကိုလိုအပ်)
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ဘယ်လာရုစ်အနုညာတစီရင်, နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, Expropriation, ဘက်မလိုက်ဘဲမျှတသော, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး, ကူဝိတ်အနုညာတစီရင်, လစ်ဗျားအနုညာတစီရင်, ပဲရစ်အနုညာတစီရင်, ရုရှားကအနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်, ဝီလျံ Kirtley, ယီမင်အနုညာတစီရင်